Kanto hita maso : hisy ny « résidence » any New York | NewsMada
Kanto hita maso : hisy ny « résidence » any New York
Misokatra ny lalana amin’ny fampitomboana traikefa sy fampivelarana ny fifandraisana amin’ny any ivelany ho an’ny mpanakanto mikirakira ny hita maso. Manolotra “résidence de création” na fotoana hipetrahana sady hamoronana ho an’ireo tanora mikolo ny kanto hita maso, monina aty amin’ny kaontinanta afrikanina na koa teratany afrikanina, saingy monina any ivelan’ny fireneny, ny fikambanana Africa’Sout!.
Any New York io “résidence de création” io ary haharitra enina herinandro, ny septambra sy oktobra 2018. Efa misokatra ny fisoratana anarana ho an’ireo liana amin’izany, ary tsy ho diso anjara ny mpanakanto malagasy raha toa ka misy ny faniriana hanatrika hetsika toy izao, izay heverina fa tsy manindroa kanefa hahazoana tombontsoa maro.
Nomarihin’ny mpikarakara fa natao ho an’ireo mpanakanto mitaky ny fanatsarana ny tontolom-piarahamonina sy ny lafiny politika aty Afrika ny “résidence”. Ankoatra ny fotoam-pamoronana, hanana tombony manokana ireo artista hotsongaina, satria haranty ny sanganasany. Hihaona amin’ny matihanina samihafa, eo amin’ny tontolon’ny kanto, any New York any, ihany koa izy. Manohana izao hetsika izao ny Denniston Hill, karazana fikambanana naorina mpanakanto amerikanina telo mianadahy. Mampiroborobo ny kanto hita maso, ny literatiora, ny siansa, ny fanabeazana, sns, izy ireo. Antenaina fa ho maro ny mpanakanto malagasy hisoratra anarana ary ho anisan’ny ho voafidy amin’ity “résidence de création” ity.